United Airlines inodzivirira ayo anokosha emitero
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » United Airlines inodzivirira ayo anokosha emitero
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • ushanyi • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Nhoroondo ye United Airlines Holdings, Inc. nhasi yazivisa kuti Board of Directors yavo yabvumirana chirongwa chekuchengetedza mutero (iyo Chirongwa) kuchengetedza nekudzivirira kugona kweKambani kushandisa muhombe kurasikirwa kwekutakura (NOLs) uye mimwe mitero yemitero pasi peChikamu 382 cheInternal Revenue Code ( iyo Kodhi). Iyo Chirongwa yakafanana nezvirongwa zvakagamuchirwa nemamwe makambani ane akakosha maNOL.
Kubva munaGunyana 30, 2020, UAL yakashumwa yakasanganiswa yemubatanidzwa maNOLs angangoita $ 8.2 bhiriyoni. Aya maNOL, ayo akawedzera zvakanyanya mumwedzi yapfuura, aripo kudzikisa ramangwana reKambani remubhadharo wemutero uye inomiririra kukosha kwakakosha kuKambani. Chinangwa chePurani ndechekudzivirira kugona kweKambani kushandisa izvi zvinhu zvemitero, zvinove zvishoma kwazvo kana Kambani ikawana "shanduko yemuridzi" mukati mezvinoreva Chikamu cheSvondo 382 cheCode. Kazhinji, "shanduko yemuridzi" inoitika kana huwandu hwechitoro cheUAL chine mumwe kana vanopfuura vayo "vashanu muzana muzana vagovani" (sekududzirwa kwazvinoitwa muChikamu 5 cheCode) zvinowedzera neanopfuura makumi mashanu muzana mapoinzi pamusoro pekuumburuka. makore matatu emakore.
Tichifunga nezvekushomeka uye kuderera kwemutengo wemusika weakajairika stock inokonzerwa nekuderera kwakanyanya kwekudiwa kwekufamba nendege kunokonzerwa nedenda re COVID-19 uye nezvimwe macroeconomic zvinhu uye mukufunga kwekugona kwekutengeserana kunosanganisira kutengeswa kana kuburitswa kweUAL zvakajairika. stock, UAL's Board of Directors yakatsunga kutora chirongwa ichi kudzivirira kukanganisa kusinga zivikanwe kwemaNOL ekambani.
Zvichienderana neChirongwa, UAL ichaburitsa, pachishandiswa chikamu, imwe inodiwa share share kutenga kodzero yega yega mugove wakasarudzika weUAL zvakajairika stock kune avo vanochengeta rekodhi pakupera kwebhizimusi muna Zvita 14, 2020. Varidzi vemasheya havafanirwe kutora chero chiito chekugamuchira kodzero. Pakutanga, kodzero idzi hadzizoshandisike uye dzichatengeserana, uye nekumiririrwa ne, zvikamu zveiyo UAL zvakajairika stock.
UAL inotarisira kuendesa iyo Chirongwa kuvhota yevavo vanochengeta pamusangano wayo wepagore we2021. Iyo Chirongwa ichapera pazuva rekutanga rebhizinesi zvichitevera kugoneswa kwemhedzisiro yekuvhota yemusangano wegore wegore ra2021, kunze kwekunge varidzi veUAL vabvumidza Chirongwa pamusangano wakadai, ipapo chirongwa ichi chichaenderera zviripo kusvika Zvita 4, 2023, kunze kwekunge chapera. pakutanga maererano nemitemo yaro.
Pasi peChirongwa, kodzero dzinowanzo shandiswa chete kana munhu kana boka (munhu "anowana") achiwana muridzi anobatsira we4.9% kana zvimwe zvezvikamu zvakasarudzika zvezvikamu zveUAL zvakajairika mukutengeserana kusingatenderwe neBhodi. Mumamiriro ezvinhu akadaro, mumwe nemumwe ane kodzero (kunze kwemunhu ari kuwana, ane kodzero dzinozoshaya basa uye dzisingazoshandisike) anozove nekodzero yekutenga, panguva iyoyo -zvino mutengo wekurovedza muviri, zvimwe zvikamu zveUAL zvakajairika masheya pane makumi mashanu. % dhisikaundi. Bhodhi, nesarudzo yayo, inogona kuchinjanisa kodzero yega yega (kunze kwekodzero dzeanowana munhu anga asisina chinhu) izere kana chikamu, pachiyero chekutsinhana chechikamu chimwe chete cheUS zvakajairika stock nekodzero yakasarudzika, zvichienderana nekugadziriswa. Kunze kwekunge zvapihwa muChirongwa, Bhodhi rine kodzero yekudzikinura kodzero iri pa $ 50 kurudyi.
Kana munhu kana boka zvinobatsira kuva ne4.9% kana zvimwe zvezvikamu zvakasarudzika zveUAL zvakajairika stock kusati kwaziviswa nhasi kwePlan, ipapo munhu wacho kana iro boka revaridzi riripo muzana vanozoberekwa. Nekudaro, ivo vane gogo vane vagovana havawanzo bvumidzwa kuwana chero akawedzera masheya.
Ruzivo rwekuwedzera maererano neChirongwa richave mune Razvino Chirevo paFomu 8-K inofanirwa kuiswa neUAL neUS Securities and Exchange Commission.
Sidley Austin LLP iri kuita segweta repamutemo kuUAL.
Tweed-New Haven Airport kuenda kuTampa nendege paAvelo...
Tarirai ruzhinji: Trump 'taekwondo...
Chiratidziro chitsva chinonyomba mutungamiri weChinese Xi Jinping chinovhura...
Czech Republic inorambidza vanhu vasina kubayiwa kubva kune ese...
Mutungamiriri weAfrican Tourism Board muGhana akazivisa ...
WTM Responsible Tourism Awards Vahwina Vakaziviswa
Guta guru reSolomon Islands riri pasi penguva yekusvika pamba mushure memhirizhonga ...
Boeing inogadzirisa MAX nyaya dzevagari asi FlyersRights ...